Oromo News 04.30.21 | KWIT
Oromo News 04.30.21
By Fatiya Adam • Apr 30, 2021
Deparmantin Sioux City akka himaniti guyyaa kaleesa uf ajjeesun kan shakaman jiraatoni Sioux City lama jaarsa jaarti kan ta’an jiruu isaani dhabani jiru.
Qorattooni bakka irrati argamanii ragaa argatan irraa akka ibsanitti Nicholas Socknat osoo uf hin ajjeesin dura dua Kelli Socknat tiif akka itti gaafatamuma qabu himan.
Dubataa akka jedhutti namni kami mana keessati qaayni kan irra gahuu yoo tae, bakka deparmanti polica yookin bakka nagahaa kan mana keessa yoo qaayni kan jiraatu bakka gorsa namaa kennati akka himu danda’an ibsan.
Iowa Gov. Kim Reynolds akka jetteti dollaara Million $95 kan talali corona virus kan schoola kennamuuf federal irraa kennamu hedu kuffiste sababani isaa ni fayyada jedhee hin yaadu jette.
Reynolds, gabaasa republican irrati guyyaa kamsaa galgala Fox News irrati filannoo isii kan himte yoo tau president Joe Biden talaali kana babalisuuf birri akka kennaa hin jirre himte.
Republican party murtee Reynold dinqisiifatani jiru, bulchiinsi Joi Biden karoori ijoole mana barumsa deebisu kan yaale kan hin milkaahin yoo tau garuu Reynolds dhaaf milkaahe jira.
Auditor democratic state Rob Sand bulchittuun “polotikaa Iowa keessati dollaara fayyaa fi tax dhaan akka tabataa jirtu hime”.
Gabaasni corona virus kan schoola torbaan gad dhiifamu irrati Sioux City Community School District akka mullisutti hojattooni lama akka virus qabaman himan. Barattooni 140 ammoo adda baafamani taau jiran. Akkasumas, classroom gara garaa kan elementary schoola online deenisani jiru.
Sioux City Art Center turban tokkoo sochii bilaasha kan godhu ta’a. guyyaa wiyxata ganama qophiin buna dinqiisafannoo ganama seati 7:30 irraa hanga 9a.m kan godhamu ta’a. kibxata maneen siree keessati abaabi hafuura gaari qaban mullisun kan dabarsan ta’a.
Kamsaa galgala, Siouxland Public Media sirboota seaati 5 irraa hanga 8 kan qopheesan ta’a.
Torbaanichi guyyaa jimaata seati 5 – 7 p.m keessati kan sutu ta’a. akkasumas “wine and cheese soiree” mullisa alaa sirba waliin wal qabatee fi sirba Mike Langley dhaan kan qophaahu ta’a.
Gabaasa dabalataatif gara Art center Website kana siouxcityartcenter.org. deemudhan laalu nidandeesu.